Play content DLNA isticmaalaya VLC
VLC waxaa loo isticmaali karaa sida macmiilka UPnP / DLNA ama ciyaaryahan u ciyaaro video ama content audio ee UPnP / DLNA server kasta oo shabagga ku. Waa maxay UPnP / DLNA server warbaahinta ah - waxaa loo isticmaalaa in lagu sii qulquli video iyo files audio in UPnP / ciyaaryahanka DLNA kasta ama macmiilka sida VLC on network gurigaaga, tusaale ahaan lahayd Media Real. In this post, Waxaan ka wada hadlaynaa sida loo ciyaaro content DLNA isticmaalaya VLC si faahfaahsan iyo hubin quruxsan in ka dib markii ay halkan akhriska aanad wax shaki ah oo ku saabsan mawduucan.
Qaybta content DLNA 1. Play isticmaalaya VLC on Windows
Qaybta content DLNA 2. Play isticmaalaya VLC
Qaybta 3. Sidee ayaan ku xidhi VLC in server ah DLNA yaqaan on Windows iyo Mac?
Qeybta 1: Play content DLNA isticmaalaya VLC on Windows
Orod VLC oo taga si View> playlist . Dooro koronto Universal ee n Play doorasho ka column bidix.
VLC Media Player ma isku dayi lahayd in la helo oo dhan servers UPnP / DLNA laga heli karaa adiga oo shabag iyo soo bandhigaan. Ka dib marka aad guji aad server, arrow dropdown ah waa in u muuqdaan in ay dhinaca bidix ee server (tani waxay qaadan kartaa waqti ka mid ah. Hadda waxaad tegi kartaa iyada oo liiska fayl content on server.
Xaqa guji galka aad jeclaan lahaa inuu ka ciyaaro on VLC dooro Add to playlist. Tani waa doorasho wanaagsan files audio. Wixii video Si kastaba ha ahaatee gudbiyo, waa in aad xaq u riix iyo dooro ikhtiyaarka ah ee Play in ay isla markiiba u arkaan.
Fiiro gaar ah: VLC waqti badan (waxaad dhahdaa 5-10 daqiiqo) laga yaabaa inay qaadato in uu soo bandhigo arrow dropdown ag magac server ah tan iyo markii ay isku dayaysa in ay soo jiid liiska folder oo dhan ka server. Dhibaatadaan la og yahay in horumarinta ee VLC.
Qeybta 2: Play content DLNA isticmaalaya VLC
Bilow VLC on your computer, dooro Tools> rabtid> All> playlist> Adeegyada iyo Discovery ka dibna bilowdo Universal koronto iyo Play (UPnP).
Hadda, waxaad tagtaan dalka VLC menu ugu weyn mar dooro View> playlist, wad si aad ikhtiyaarka ah Local Network> Universal koronto iyo Play oo ay doortaan.
Waa in ay qaataan qiyaas ahaan 20-30 ilbiriqsi oo ah adeegidda laga warbaahinta si aad u la tusay uu furmo suuqa weyn ee VLC. Marka aad u doortaan, u muujin doonaa oo dhan fayl iyo files in lagu hadda oo la heli karo waxay u adeegeen si loogu isticmaalo.
Fiiro gaar ah: Ka dib markii update 2.x VLC, mar si toos ah u tegi kartaa tallaabada: View> playlist> Network Local> Universal Plug'n'Play si ay u doortaan adeegyada DLNA ku lahaa shabag iyo il iyaga ka.
Qeybta 3: Sidee ayaan ku xidhi VLC in server ah DLNA yaqaan on Windows iyo Mac?
In qoraalkii 2.x VLC iyo kuwa tan iyo markaas, mid ka heli kartaa server DLNA oo la wadaago oo ag maraya in View> playlist ah. Tani waxay u furan aragtida playlist ka halkaas oo aad si fudud u dooran kartaa fursad aad ku Local Network> Universal Plug'n'Play halkaas oo aad arki doonaa oo dhan fayl la wadaago arki karo iyo files.
Fiiro gaar ah: In ka weyn versions VLC waa meel kala duwan oo si aad aadi si Tools> rabtid> All> playlist> Adeegyada iyo Discovery, ka dibna awood Universal koronto iyo Play (UPnP).
VLC ma arki ma qalabka UPnP
Tani waa arrin caadi ah oo marar badan ah sida kaliya si loo xaliyo waa in si VLC uu dib ugu 2,08 version halkaas oo uu u shaqeeyo ganaax aan sheegin wixii arrimo dheeraad ah.
VLC shilka marka la xidhiidhinaya server MiniDLNA
Mar kale, tani waxa ay la xidhiidhaan ugu dambeeyay updates VLC. Si looga fogaado hartay halka xidhiidhinaya server MiniDLNA, dad badan ayaa laga helay dib ugu VLC 2,08 bedesheen sidii xal shaqo.
Fiiro gaar ah: Theabuura ee VLC, VideoLAN waa ay ka warqabaan arrintan oo ay ka shaqaynayaan dhinaca iyaga rectifying.
> Resource > VLC > Sidee u ciyaaro content DLNA isticmaalaya VLC